Cameroon - Mhirizhonga yeAnglophone: Kufa kwemauto maviri kunokonzera kugadzirisa muBamenda - TELES RELAY
HOME » kambani »Cameroon - Kutambudzika kweAnglophone: Kufa kwemauto maviri kunokonzera kupesana muBamenda
Mutungamiri weHurumende anotaura kuti mauto akabatwa nevanoparadzanisa paAlachu / Bafut munharaunda munzvimbo yekuchamhembe kwakadziva guta guru.
Kurasikirwa mumapoka euto reMamerbia. Mutsamba yakabudiswa pana 16 May 2019, Mutungamiri Wezvokuchengetedza (MINDEF) anotaura izvozvo "Pakati pezuva reChitatu 15 May 2019, mauto maviri akatasva motokari muguta reBamenda, akanga aine shungu uye akaurayiwa nehupombwe nemagandanga, uye akaurayiwa mumisha mune imwe nzvimbo inonzi Alachu / Bafut".
Pasina kupa chero ruzivo pamusoro pezviratidzo zvevarwi vakaurayiwa, Joseph Beti Assomo inozivisa izvozvo "Kubva pakarepo kubuda kweboka rinopindira nechinangwa chekugadzirisa uye kubvisa nzvimbo yacho, kwakaguma nokutsinhana moto nemagandanga akaedza kutiza". Ndiko apo chiitiko chakaitika.
"Mauto anotanga mukutsvaka kwavo akamborwiswa nevanhu vazhinji vasingazivi uye vane chisimba. Kuvhiringidzika kwakagumbura scuffles nekuparadzwa kwepfuma uye moto weimwe dzimba ", inozivisa MINDEF. "Ongororo yakavhurwa kuti ijekese nyaya iyi uye ichinyora vanyori vekuparadzwa kwepfuma iyo yakakonzera kukanganisa kune vadzidzisi vavo. Avo vanozivikanwa vanozopindura nekuda kwezviito zvavo maererano nemutemo ", zvaanopikira.
Izvi zviitiko zvinopera vhiki imwe mushure mekushanya kweHurumende kwekuchamhembe kwakadziva kumadokero kwematunhu. Joseph Dion Ngute uyo akapfuura shoko rorugare rweMutungamiri weRiphabliki, iye zvino achida kukurukurirana nevanoparadzanisa vezvidzidzo zvose, kunze kwerudzi rwemagariro. Saka uchapupu hwokuti nzira yekubuda mudambudziko ichiri kureba.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/05/17/cameroun-crise-anglophone-la-mort-de-deux-soldats-provoque-des-echauffourees-a-bamenda/
Kudzidza kunoratidza kuti kuzviuraya kwevasikana kuri kuwedzera, zvikurukuru pakati pe10 pa14